काबुल अपडेट- अमेरिकी सैनिकसहित मारिनेको संख्या ९० नाघ्यो, के भन्छ अमेरिका ? — Sanchar Kendra
काबुल अपडेट- अमेरिकी सैनिकसहित मारिनेको संख्या ९० नाघ्यो, के भन्छ अमेरिका ?
काठमाडौँ । बिहीबार साँझ अफगातिस्तानको राजधानी काबुलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर वि’स्फोटन हुँदा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ९० भन्दा बढी पुगेको छ। अफगानिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार सीएनएनलाई दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म सो घटनामा १५० भन्दाबढी व्यक्ति घाइते भएका छन्।
अमेरिकाले सो घटनामा आफ्ना १३ सेना ज्यान गएको बताउँदै आईएसविरुद्ध बदला लिने बताएको छ। यसबीचमा तालिबानले उक्त विस्फोटनमा अमेरिकीभन्दा आफ्ना मान्छे बढी मारिएको दाबी गरेको छ। रोयटर्सका अनुसार तालिबानले २८ तालिबानीको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ।
यस्तै अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भारतीय वायु सेनाको एक विशेष विमानले गत बुधबारदेखि उद्धार गर्न नपाएको खबर सार्वजनिक भएको छ। सो विमानले अफगानस्तानका सिख र हिन्दु नागरिक गरी १४० जनालाई उद्धार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।